> Resource > Video > Top 5 Best Free wmv Video Editors
Helitaanka haboon software video tafatirka waa wax shaqo adag. Waxa jira doorashooyin badan dhacdadiii joogo, naf dhibkeed qalabka soo waayo, xataa lacag la'aan ah. Sidaas, waxa ay u muuqataa dabiiciga ah ay dadku u jeediya u qalabka tafatirka video free halkii ay isticmaasho lacagta aalad, taas oo aan waxba laakiin sifooyinka isku mid ah. Halkan waxaa ku qoran liiska shan qalab sare oo lacag la'aan ah wmv video tafatirka, kaas oo kasoo muuqdo dhammaan noocyada kala duwan ee aan joogtada ahayn baahida video tafatirka:
Windows Movie Kan sameeyey,
Talinayo: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Kan sameeyey Window Movie waa barnaamij video tafatir ah oo si sahlan loo isticmaalo ee ay Microsoft. Waxa ay taageertaa qaabab kala duwan oo ay ku jiraan video wmv, ASF, Mpg, AVI, WMA, regelingen iyo MP3. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud isku dari kartaa sawiro aad video leh ama astaysto kartaa video la fursadaha video guurka horena sidoo kale saamayn kale video. Si kastaba ha ahaatee, qalab uu leeyahay xadeynta yar taas oo ka dhigi intan yar ee qalab aan ku haboon ujeedooyin xirfad video tafatirka.
Si fudud loo isticmaali interface;
Fursadaha video tafatirka dhab ah oo bilowga ah.
Shilalka badan oo ma xamili karo files waaweyn;
Versions kala duwan ayaa la sii daayay, inkastoo kala duwan yihiin si dhab ah laga samri karo.
Movica waa editor ah graphic ama filim for Windows (.wmv) Media, files MPEG iyo filimada FLV. Barnaamijkan wuxuu awood kuu siinayaa in aad nuqulka, paste dooro ama tirtirto qaybo badan oo ka file video ah. Way fududahay in la isticmaalo iyo waxa uu leeyahay tuuryo keyboard taas oo ka dhigaysa shaqo ee tafatirka wmv badan si fudud. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la soo ururiyey sidii oo ah 32-yara Windows oo sidaas dhigaysa cillado ay ugu waaweyn ee ka users kale oo hore u isticmaali jiray 64-yara Windows.
Badan tuuryo keyboard in la sameeyo tafatir fudud.
Ma taageeri Windows 64-yara;
VSDC Free Video Editor waa codsi ah oo loogu talagalay video tafatirka. Waxa ay taageertaa qaabab kala duwan oo ay ku jiraan video AVI, Mpg, MOV, wmv, MKV, dhexena, Jabbuuti, iyo files FLV. Waa codsi adag la fara badan ka shaqeynayaan, qalabka sawirka iyo xulashada, badan oo midabka iyo iftiiminta kaabidda, qaar ka mid ah sida diirada waxtar leh, kala guurka, saamaynta audio iyo in ka badan. Kuwan oo dhan laguu ogolaado in aad ku darto xiriiri shakhsi si aad video files.
Fursado badan oo waxtar leh la siiyaa;
Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sida Converter video ah.
Khayraadka Computer (processor iyo RAM) waxaa looga baahan yahay si heer sare;
Interface eegto laga yaabaa adag.
Video qalabeed waa awood online video editor lacag la'aan ah. Waxay awood u aad si fudud loogu badalo videos, ku dar watermark qoraalka, gooyay videos, videos dalagga, midowdo dhowr video files, demux video files iyo wax ka badan. Waa awood u maarayso video files ilaa 600 MB. Muuqaal kale oo waa si ay u falanqeeyaan faylasha video iyo soo bandhigaan warbixin faahfaahsan oo ku saabsan codec ah, heerka yara, heerka jir, xallinta, iwm
Easy in la isticmaalo;
Xoog awoodda diinta video.
Kaliya waxay bixisaa hawlaha video tafatirka fudud.
Cellsea waa editor kale online video ah oo taageera qaabab kala duwan oo ay ku jiraan video wmv, dhexena, 3GP, DIVX, FLV, AVI, MOV, Mpg, VOB iyo MP4. Iyada oo ay taasi adeega video tafatirka online lacag la'aan ah, waxaad gali kartaa adiga oo videos, si fudud ku dari saamaynta, beddesho size video, ku dar dhawaaqa ama badalo aad video in qaab kale oo ka dibna la wadaagto asxaabtaada ugala.
Si fudud xaalkaa aad videos online kuwa kale la wadaago.
Miyuu file size xadka.
Haddii aad u baahan tahay qalab video tafatirka xirfad dheeraad ah, Wondershare Video Editor si weyn lagu talinayaa. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u abuuraan filimada guriga Hollywood-sida la horyaal, saamaynta iyo ka gudbayo oo dhan si joogto ah videos, Cajalado iyo sawiro. Dhammaan qalabka video tafatirka ay ka mid yihiin goo, kala, dalagga, iwm waxaa la siiyaa. Ka dib markii sixiddiisa videos, aad xitaa isticmaali kartaa software ah si ay ula wadaagaan qoyska iyo saaxiibada, diinta videos in qaabab kala duwan oo gubi DVD.
Top 10 Most Aragti YouTube Videos of 6 noocyo in kasta Week of 2014